ဘယျလောကျပဲခဈြခဈြ အခြိနျတနျရငျ ပွတျမှာပဲဆိုတဲ့ အကွညျ့တှကွေားမှာ တှဲထားတဲ့ လကျတှလေဲ မွဲပါစေ - Tameelay
March 17, 2020 Tameelay Tameelay Knowledge 0
ဘယျလောကျခဈြခဈြ အခြိနျတနျရငျ ပွတျမှာပဲ တဲ့ အဲ့တာ သစ်စာတရားဆိုတာ ဘာမှနျးမသိတဲ့လူတှပွေောတဲ့ စကားတှပေါ နားလညျမှုတှေ ရောထားတဲ့ အခဈြတဈခုကို သူတို့တှေ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ မတှကွေ့ မဆုံခဲ့ကွဖူးဘူး ပေးဆပျခွငျးဆိုတဲ့ ဘာသာစကားကို သူတို့တှေ ဆကျပွီး မလလေ့ာလဲ့ကွဘူး ။
အခဈြ . . . အေးမွခွငျး အေးခမျြးခွငျးဆိုတဲ့ သဘောကို ဆောငျပါတယျ ။
သဘောထားမတိုကျဆိုငျလို့ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျတှအေောကျမှာ ပွတျတောကျသှားတဲ့ ဆကျဆံရေးတှကေို ကွညျ့ရငျ သူတို့ဟာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ခဈြပဲ ခဈြတတျခဲ့ကွတာ နားလညျမှုတှေ ယုံကွညျမှုတှထေားဖို့သတိမရကွဘူး ။
အဲ့ဒီအစား မာနတှထေားခဲ့ကွတဲ့အခါ လမျးခှဲပွတျစဲခွငျးဆိုတဲ့ လမျးဆုံးမှာပဲ အဆုံးသတျကွတာမြားတယျ ။
အမိတဈဝမျးတညျးက ထှကျတဲ့လူတှတေောငျ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မတူကွတာလေ ။
သူစိမျးနှဈယောကျ လကျတှဲလြှောကျတဲ့အခါ အနဲနဲ့အမြားတော့ သဘောထား ကှဲလှဲကွတာပါပဲ ။
အခဈြတဈခုနဲ့ လကျတှေ တှဲထားလို့ ရတယျ ဒါပမေယျ့ လကျတှဲတှမွေဲဖို့ အခဈြတဈခုတညျးနဲ့ မလုံလောကျဘူး ။
သဘောထားကှဲလှဲမှုတှေ ရှိတဲ့အခါ နားလညျမှုဆိုတာနဲ့ ခြိနျညှိပေးရတယျ
တဈဖကျက တငျးတဲ့အခါ တဈဖကျက အထိုကျအလြောကျလေး အလြှော့ပေးတတျရတယျ ။
ကိုယျ့ဘကျသူ့ဘကျပေါ့ တဈဖကျခညျြးပဲ လြှော့ပေးနရေရငျလဲ လကျတှဲတှေ ပကျြမသှားတောငျ စိတျတှေ ပကျြသှားနိုငျတယျလေ ။
အဝေးရောကျရငျ သှေးအေးတယျဆိုတဲ့စကားတှေ နဲ့ ကိုယျ့ကိုယျလဲ မနှိပျစကျနဲ့ တဈဖကျကိုလဲ သံသယတှေ မထားနဲ့ ယုံကွညျမှုဆိုတာ အလကားမဟုတျဘူး ယုံကွညျမှုလေး ထားပေးလိုကျပါ ယုံကွညျမှုနဲ့ မထိုကျတနျလို့ ပွတျသှားတဲ့ ဆကျဆံရေးဟာ အခဈြမဟုတျဘူး ဝဋျကွှေးတဈခုကသြှေားတယျလို့ မှတျလို့ရတယျ ။
သူဆိုတာ ကိုယျမဟုတျဘူးဆိုတဲ့ အတှေးလေးလဲ ထညျ့ထား အရာရာတိုငျးကို ဖွဈစခေငျြတဲ့ ဆန်ဒတဈခုတညျးနဲ့ ဖွဈလာနိုငျတာမြိုးမဟုတျဘူး ဖိအားတှအေရမျးပေးတဲ့အခါ ကိုယျနဲ့ ဝေးရာကို တှနျးကနျပဈလိုကျသလိုမြိုး ဖွဈသှားတတျတယျ ခဈြတတျဖို့ လိုပါတယျ
ဘယျလောကျထိခဈြလဲဆိုတာ အခြိနျဘယျလောကျကွာပွီဆိုတဲ့ အရာတှနေဲ့တိုငျးတာလို့ မရဘူး အဓိက ကိုယျဟာသူ့အတှကျသူဟာကိုယျ့ဘဝအတှကျ ဘယျအတိုငျးအတာအထိ အရေးပါသလဲဆိုတာနဲ့ပဲ တိုငျးတာလို့ရပါတယျ ။
ဘယျလောကျပဲခဈြခဈြ အခြိနျတနျရငျ ပွတျမှာပဲဆိုတဲ့ အကွညျ့တှကွေားမှာ တှဲထားတဲ့ လကျတှလေဲ မွဲပါစေ မွဲအောငျတှဲထားတဲ့လကျတှနေဲ့လဲ ပေါငျးဖကျနိုငျပါစေ အခြိနျရငျ ပွတျမှာပဲဆိုတဲ့လူတှကေို သတေဲ့အထိတောငျ မပွတျဘူးဆိုတဲ့အကွောငျး သကျသပွေနိုငျကွပါစေ ။
ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် အချိန်တန်ရင် ပြတ်မှာပဲ တဲ့ အဲ့တာ သစ္စာတရားဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့လူတွေပြောတဲ့ စကားတွေပါ နားလည်မှုတွေ ရောထားတဲ့ အချစ်တစ်ခုကို သူတို့တွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မတွေ့ကြ မဆုံခဲ့ကြဖူးဘူး ပေးဆပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ဘာသာစကားကို သူတို့တွေ ဆက်ပြီး မလေ့လာလဲ့ကြဘူး ။
အချစ် . . . အေးမြခြင်း အေးချမ်းခြင်းဆိုတဲ့ သဘောကို ဆောင်ပါတယ် ။
သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာ ပြတ်တောက်သွားတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကို ကြည့်ရင် သူတို့ဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ပဲ ချစ်တတ်ခဲ့ကြတာ နားလည်မှုတွေ ယုံကြည်မှုတွေထားဖို့သတိမရကြဘူး ။
အဲ့ဒီအစား မာနတွေထားခဲ့ကြတဲ့အခါ လမ်းခွဲပြတ်စဲခြင်းဆိုတဲ့ လမ်းဆုံးမှာပဲ အဆုံးသတ်ကြတာများတယ် ။
အမိတစ်ဝမ်းတည်းက ထွက်တဲ့လူတွေတောင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြတာလေ ။
သူစိမ်းနှစ်ယောက် လက်တွဲလျှောက်တဲ့အခါ အနဲနဲ့အများတော့ သဘောထား ကွဲလွဲကြတာပါပဲ ။
အချစ်တစ်ခုနဲ့ လက်တွေ တွဲထားလို့ ရတယ် ဒါပေမယ့် လက်တွဲတွေမြဲဖို့ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ဘူး ။
သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ရှိတဲ့အခါ နားလည်မှုဆိုတာနဲ့ ချိန်ညှိပေးရတယ်
တစ်ဖက်က တင်းတဲ့အခါ တစ်ဖက်က အထိုက်အလျောက်လေး အလျှော့ပေးတတ်ရတယ် ။
ကိုယ့်ဘက်သူ့ဘက်ပေါ့ တစ်ဖက်ချည်းပဲ လျှော့ပေးနေရရင်လဲ လက်တွဲတွေ ပျက်မသွားတောင် စိတ်တွေ ပျက်သွားနိုင်တယ်လေ ။
အဝေးရောက်ရင် သွေးအေးတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေ နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်လဲ မနှိပ်စက်နဲ့ တစ်ဖက်ကိုလဲ သံသယတွေ မထားနဲ့ ယုံကြည်မှုဆိုတာ အလကားမဟုတ်ဘူး ယုံကြည်မှုလေး ထားပေးလိုက်ပါ ယုံကြည်မှုနဲ့ မထိုက်တန်လို့ ပြတ်သွားတဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အချစ်မဟုတ်ဘူး ၀ဋ်ကြွေးတစ်ခုကျေသွားတယ်လို့ မှတ်လို့ရတယ် ။
သူဆိုတာ ကိုယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးလေးလဲ ထည့်ထား အရာရာတိုင်းကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး ဖိအားတွေအရမ်းပေးတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့ ဝေးရာကို တွန်းကန်ပစ်လိုက်သလိုမျိုး ဖြစ်သွားတတ်တယ် ချစ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်
ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာပြီဆိုတဲ့ အရာတွေနဲ့တိုင်းတာလို့ မရဘူး အဓိက ကိုယ်ဟာသူ့အတွက်သူဟာကိုယ့်ဘ၀အတွက် ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ အရေးပါသလဲဆိုတာနဲ့ပဲ တိုင်းတာလို့ရပါတယ် ။
ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် အချိန်တန်ရင် ပြတ်မှာပဲဆိုတဲ့ အကြည့်တွေကြားမှာ တွဲထားတဲ့ လက်တွေလဲ မြဲပါစေ မြဲအောင်တွဲထားတဲ့လက်တွေနဲ့လဲ ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေ အချိန်ရင် ပြတ်မှာပဲဆိုတဲ့လူတွေကို သေတဲ့အထိတောင် မပြတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း သက်သေပြနိုင်ကြပါစေ ။
မတ်ေတာဖွငျ့ခညျြသောလကျတှမွေဲစသေား. . . . .